Anobvisa makazara: rinonaka Recipes, kunyanya kubika uye wongororo
Food uye zvinwiwa, Recipes
Makazara anobvisa - a anonakidza dhishi kuti anogona kuziva kunyange gourmets. Zvinonzi dzinoratidzwa Spicy pakubika uye zvinofadza kusimba hunonhuhwira. Uye nokuda kwayo kujairika chitarisiko, unogona kuva vakakodzera chishongo chero chisvusvuro bato. Mazuva ano nyaya muchawana dzinonakidza Kubika inobata dzakadaro.
Nokuti stuffing chinodiwa kushandisa anobvisa huru, kubva izvo pfupa rinobviswa pachine. Asati stuffing kuomeswa, ivo inenge iri mvura kwenguva pfupi. Zvakafanira kuti vakazochinja dzikawedzera kukura.
Akagadzirira nenzira iyi chigadzirwa iri vakapedzwa, yaoma zvishoma uye muzadze akasarudzwa zvekupfakira. Pasinei zvose zvakasiyana-siyana zvaungasarudza, kunyanya akakurumbira pakati mafeni ose ndiro dzakadaro inonakirwa anobvisa makazara howa, nzungu kana chizi. Kazhinji chikamu zvinodiwa kuwedzera negariki, chizi, hanyanisi uye mazai akabika.
Kana stuffing muitiro, pane nzira dzakawanda. Izvi zvinogona kuitwa kubudikidza zvishoma elongated gomba kuburikidza iyo pfupa rakabvisirwa. Vamwe cook kuti mwena kumativi ichi diki cheka uye akazadza zvakakwana nokugurira mizambiringa stuffing. Muchiitiko chino, wakakwana michero yakaomeswa tifunge zvakafanana shoma kegs.
Pane imwe nzira stuffing, apo muchero unotemwa nepakati, asi kwete kusvikira kumagumo, uye mukati avete kunze stuffing. Chinoitirwa nzira iyi zvikuru zvakafanana anobvisa vakagovana deko mussels.
Option pamwe nzungu uye yakashapa ruomba
Maererano tapedza kutaurwa yokubika inogona nekaupenyu kutsanya kubika inonaka jälkiruoka. Anobvisa makazara yakashapa Cream uye fruit, achava nomufambi kuwedzera kuungana ushamwari. Kusika izvozvo, unofanira:
500 magiramu ose plums akaoma;
500 milliliters ose anovava ruomba;
½ mukombe shuga;
Saka makazara michero yakaomeswa vakatendeuka manyoro uye zvinonaka, vakadurura kufashaira mvura uye siya kwehafu yeawa. maminitsi makumi matatu gare gare, michero yakaomeswa vari vakaisa pamusoro mucheka kumumirira vachaasvina chero mvura residues. Panguva iyi, unogona kutora cream. Kuti kubika mundiro, nokubatanidza shuga uye yakashapa ruomba uye whisk ane chisanganiso kana blender. Nuts vari kucheneswa kubva goko, furaya nenzira yakaoma pani muzadze nomumwe anobvisa. Agadzirira dhizeti kupararira mundiro uye kudurura cream.
Option pamwe rum at
Iyoyi dhizeti akakwana kuti kudanana chisvusvuro. Kugadzira kujairika uye kunhuhwirira chaizvo anobvisa makazara nzungu, unofanira kuva nyore uye nyore ingredients. In kicheni kwako kuva:
magiramu 200 vanorichekerera, pitted;
100 milliliters ose anovava ruomba;
50 magiramu ose akanatsa nzungu;
Vaviri spoon rum at;
50 milliliters ose ruomba;
50 magiramu weupfu shuga ose;
Pre steamed yaoma michero kupararira mune yakakodzera mugaba ugodira rum at. maminitsi gumi gare gare, Marinated anobvisa vakazadzwa wakatemerwa nzungu uye aiswe kremanku. Zvino yava nguva yokuita mumuto. Kuti kuita mune imwe piala pie cake pamwe weupfu shuga uye kuwedzera ruomba, pasina kukunyengetererai kushandisa chisanganiso. Makazara anobvisa kudurura muto ichi uye kushumira.
Option pamwe nenyemba
Nuts akaita pamusoro pazasi-vanorondedzerwa zvigadzirwa, zvakasiyana Spicy, mwero Spicy kuravira. Naizvozvo budai pakati pavo munhu tudyo chikuru kana Garnish wakanaka nyama kubikwa. Nokuti gadziriro yavo uchada:
magiramu 300 plums akaoma;
50 g Red nenyemba;
nemudzimai clove ose negariki;
100 magiramu ose shelled fruit.
Presoaked nenyemba yakabikwa acharungwa mvura. Kamwe zviri wagadzirwa, wedzera kuti manatsi negariki uye pasi vachishandisa blender. Dried muchero scalded pamwe kufashaira mvura uye muzadze zvichiguma vakawanda. Vakashumira anobvisa makazara gariki nenyemba uri yakanaka sandara mundiro mudungwe pamwe lettuce mashizha.
Option chocolate uye yaiitwa yakapfupikiswa mukaka
Izvi zvinonaka uye zvinovaka muviri dhizeti zvirokwazvo vanowana uye vakuru kuchizvarwa chevechiduku. Asi iye ari kuwana zvakakwana mukuru-mafuta, saka haagoni kushandiswa kakawanda. Ari kugadzirira nyore chaizvo zvemichina uye pasi mari ingredients. Usati watanga achiita makazara vanorichekerera, nechokwadi chokuti une pamba ine zvose zvamunoda. Panguva ino uchada:
½ magaba ose yaiitwa yakapfupikiswa mukaka;
200 magiramu 36% misfit ruomba;
vaviri spoon Vanilla kweshuga yomuropa;
zvidimbu zvakawanda chokoreti;
chero akasvuura nzungu.
Dried pitted dira mvura iri kufashaira uye siya kwemaminitsi makumi maviri. The mvura akabva inobviswa uye anobvisa obsushivayut papepa matauro. Pashure pacho, mumwe muchero yakaiswa rimwe nzungu. Makazara anobvisa akaitwa ari ice-Cream mbiya, ndidire yaiitwa yakapfupikiswa mukaka arisase grated chokoreti. Agadzirira dhizeti yakashongedzwa ruomba, arohwe pamwe Vanilla shuga, uye mushumire.
Option pamwe chizi
Maererano tapedza kutaurwa yokubika inogona nekaupenyu kurumidza chokutanga flavoured tudyo kuti zvichaita vashongedze chero mutambo. Zvinonzi kubva asiri mwero akagadzirwa zvinhu, saka nechokwadi pachine kuti uine paruoko inowanikwa:
anobvisa huru 40;
200 magiramu ose nonacidic nyoro chizi;
100 magiramu ose shelled fruit;
Washed michero yakaomeswa dira mvura iri kufashaira uye siya kwehafu yeawa. Zvichakadaro, vari mbiya zvinobatana chete grated chizi, mayonnaise, akapwanyika negariki uye wakatemerwa nzungu. izvi zvose zvakanaka vakamutsa kusvikira yunifomu. Wana yakawanda ose zvinhu anobvisa uye kuchenesa zvose vari firiji. Mushure maawa mana, rimwe tudyo takagadzirira kushandiswa.
Recipes stuffed anobvisa siyana zvakanyanyisa chisingachinjiki. Saka, pamwe nekugadzirira ndiro izvi anogona kugadzirisa chero waachangoroora. Kuti mumwe dhizeti anonakidza uchava vanoda:
magiramu 300 anobvisa yakaomeswa kana aisvuta, pitted;
milliliters 300 25% anovava ruomba;
100 magiramu ose akasvuura fruit;
5 spoon dzakarukwa zvakanaka crystalline shuga ose.
Dried zaparivayut muchidimbu kufashaira mvura, obsushivayut uye notched zvokuti pamusoro ruoko rimwe akaumba anonzi muhomwe. In nomumwe wavo vakaisa fruit woiswa kremanki. Zvino yava nguva yokuita chinonhuhwira zvekupfakira. Kuti sika nayo duku mbiya nokubatanidza anovava ruomba pamwe shuga uye whisk chisanganiso zvose. The zvichiguma muto hwakapararira pamusoro ice-Cream nendiro michero yakaomeswa. pamwe Cocoa poroshkopodobnym Asati kushumira anobvisa makazara nzungu mu Cream muto, kusaswa.
Appetizer, yakabikwa maererano aiitwa, akasiyana Spicy, zvishoma yakashapa kunaka uye inofadza ndimu munhuhwi. It rine nyore uye chipa zvinogadzirwa kuti unogona kutenga chero Supermarket nhasi. Usati wasvika patafura mukicheni, iva nechokwadi kuti nekaviri-tarisa kana uine zvose unofanira nyore. Muchiitiko chino, unofanira:
250 magiramu pamusoro vanorichekerera, pitted;
yetea pamusoro mayonnaise;
50 magiramu chero chizi rakaoma;
clove pamusoro hadiyo;
50 magiramu ose shelled fruit;
dzinongoitika ndimu muto.
Anobvisa ndokuwarira muhari kwakadzika, dira mvura achibika uye siya kwemaminitsi gumi nemashanu. Steamed yaoma pukuta nebvudzi kuraswa kicheni matauro uye kubvisa kurutivi. Ari oga mbiya, nokubatanidza grated chizi, yakagochwa wakatemerwa nzungu, akapwanyika negariki uye mayonnaise. izvi zvose zvakanaka vakamutsa kusvikira yunifomu. Anobvisa makazara kunoguma gobvu ndokuwarira mundiro yakanaka. The rakapedzwa tudyo shongedza nemiriwo itsva uye dzinongoitika ndimu muto kusaswa.
Reviews pamusoro cook
Madzimai epamusha Vakawanda kazhinji kugadzira madhishi izvi, vanozviti kuti vanogona kushandisa kwete chete kune imwe mhuri chirariro, asiwo kune gala chisvusvuro. Anobvisa vakawana zvinoshamisa inonaka zvokuseredzera uye yepakutanga nyama nezvikafu zvishoma.
cook ruzivo zano kusarudza kuti chinangwa ichi yaoma panyika iyo hakuna sokurwarirwa kubwinya. kazhinji Gloss chiratidzo kuti nokugurira mizambiringa nechekare glycerin. The pose chatingatevedzera zvibereko zvinofanira kupendwa mune yunifomu rima ruvara. Izvi anobvisa ane chinonhuwira kuravira. Kuvapo munyoro acidity kunoratidza kuti michero ine mumwe yakawanda ascorbic acid.
Chokwadi, nyore nzira kutenga michero yakaomeswa pasina mbeu. Asi kana iwe usingagoni kuwana nokugurira mizambiringa yakadaro, unogona kuvabvisa pachako. Nokuti ichi muchero Kubika mvura pre-steamed, uye ipapo nyore ribviswe pakati muhunza dzavo.
Options mumakomba stuffed anobvisa saka siyana kuti mumwe nomumwe uchawana chinhu kuti vangadai Waipfuudzira kwaari. In maonero ruzivo nevanhu vaishanda vose ava tastier vakawana michero yakaomeswa akazadza kunyanya mafuta yokurenda chizi, gariki, miriwo, mazai uye chizi. Kazhinji ndiro izvi mukwanisi howa, huku kana minced nyama. Kana zvokuseredzera, vanonakidza kupfuura nzira vanoonekwa, sorutivi izvo pane nzungu, pie cake, yaiitwa yakapfupikiswa mukaka uye chokoreti.
Pancakes pamwe mitema nehanyanisi. nyore Recipes
Delicious keke kubva mbiriso mukanyiwa pamwe jamhu: kuti tikundikane vakakurumidza
Mbiriso Pancakes nomukaka: resipi
Cake "Sweet Potatoes" - ndangariro muuduku
Nuts namatidza: kubika uye resipi zvakavanzika
Steak Florentine: zvinhu uye chigadzirwa gadziriro mitemo
Mimosa pudica mumba; kurima uye kutarisirwa
Afandou Beach 3 * muna Rhodes. A rondedzero mamiriro ezvinhu enyika kugara pahotera, vafambi wongororo
Oleg Yankovsky: Filmography, yakanakisisa mabasa
Chii chiri muThoko? Kugadzirisa uye kubvisa tabhi
Iko chirongwa chekuvandudza kuponesa nguva dzakaoma Chii icho "mupata wekufa wekutanga" uye kuti ungararama sei.
Chii chinonzi nemakadhibhokisi pai?
Dream dudziro: chii zviroto kutsvoda mukomana?
Olga Medvedtseva: Biography uye pikicha
Zviga fungidziro mhosva
Vanilla Chaizvoizvo - sei kugadzirira uye chii kutsiva?
Trendy chevana siketi